အစိုးရဆေးရုံများတွင် အရေးပေါ်ကုသမှု ဌာနများကို တိုးချဲ့မည် – YANGON STYLE
အစိုးရဆေးရုံများတွင် အရေးပေါ်ကုသမှု ဌာနများကို တိုးချဲ့မည်
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ကုသမှုဌာနကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
လာမည့်နှစ်များတွင် အစိုးရဆေးရုံကြီးများ၌ အရေးပေါ်ကုသမှု ဌာနများကို တိုးချဲ့ထူ ထောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆေး တက္ကသိုလ်(၁)၊ အရေးပေါ်ကုသ မှု ဆေးပညာဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမော်မော်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်း အနေဖြင့် အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံကြီး ခြောက်ခုရှိသည့်အနက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးတို့၌သာ ယင်းခေတ်မီ အရေးပေါ်ကုသမှုဌာန ဖွင့်လှစ်နိုင်သေးသည်။ သန်လျင်ဆေးရုံ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းဆေး ရုံနှင့် လှိုင်သာယာဆေးရုံတို့တွင် အရေးပေါ်ကုသမှု ဌာနများ ပြင်ဆင်နေသကဲ့သို့ အင်းစိန်ဆေးရုံ တွင်လည်း ဆောက်လုပ်နေသည်။
‘‘ပြည်သူလူထုမှာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာပေါ်လာရင် အစိုးရ ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ်ဌာနတွေက လွဲလို့ တခြားနေရာတွေမှာ သူတို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့ ဒီအတွက်လိုအပ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း သိတယ်။ ထောက်ပံ့ပေးတယ်’’ ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနများကို သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံကြီး၊ လားရှိုးဆေးရုံ၊တောင်ကြီးစဝ်စံထွန်းဆေးရုံ၊ မကွေးဆေးရုံ၊ ပုသိမ်ဆေးရုံ၊ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးနှင့် ပဲခူးဆေးရုံကြီးတို့၌ တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်။
‘‘ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ နေရာ ကိုလည်း အရေးပေါ်လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့မယ်။ လားရှိုးကတော့ ခုနကပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ ထဲမှာပါသွားပြီ ပေါ့။ လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ရင် လားရှိုးဆေးရုံကြီးကနေ ဒိုင်ခံကုပေးနိုင် မယ်။ မြစ်ကြီးနားတို့၊ စစ်တွေတို့ကလည်း လိုသေးတယ်။ အဲဒီနေရာတွေအတွက်လည်းပဲ ဒါကျွန်တော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ်’’ဟု ဒေါက်တာမော်မော်ဦးက ပြော သည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနသို့ တစ်နေ့လျှင် လူနာဦးရေ ၄၅၀ မှ ၅၀၀ ကြား လာရောက်ပြသပြီး ယင်းလူနာများအနက် ၃၀ ဦးမှ ၄၀ ဦးကြားသည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လူနာ များဖြစ်သည်။
ထာဝရနှောင်ကြိုးရဲ့ Fan Meeting
လသာနားက ဈေးလျော့နေတဲ့ ဟော့ပေါ့ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်သို့
အမည်းရောင်သောကြာနေ့ အတွက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ Sale ချပေးနေတဲ့ဆန်ဖရန်စစ်စကို ရဲ့ The Balm
2. JLPT စာမေးပွဲများကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေဆိုအောင်မြင်နိုင်ရန် 👩‍🎓
3. ပျော်ရွှင်မှုရသများနဲ့ ဘဝအမောတွေပြေပျောက်သွားစေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Tokyo Oden Boys (Sumimasu Geinin) အဖွဲ့
4. တိမ်မြှုပ်နေတဲ့အလှတရားများပြည့်နှက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်　တောင်ဘက်ပိုင်းက　ကျောက်ဖြူမြို့လေး (ရမ္မာဝတီ) 🌊⛰